Igodo ise maka ihe ịga nke ọma nke onwe gị | Martech Zone
M nwere a mkparịta ụka na otu enyi taa na nwetara email site na ọzọ na-arịọ m ndụmọdụ na-esi ewu ha onwe onye ika… na-emecha uru ya. Nke a nwere ike ịbụ isiokwu nke enyi Dan Schawbel zara nke ọma, a onwe branding ọkachamaraYa mere na-anya na ya blog. Aga m ekekọrịta echiche m banyere ihe m mere n’ime afọ iri gara aga, agbanyeghị.
Gosipụta otu ị chọrọ ka a mata gị - Echere m na ndị folks fọrọ nke nta ka ha maa jijiji mgbe ha hụrụ m… Abụ m nnukwu, gruff, keajiaji, isi awọ, na-eyi jeans na T-Chiefs. Ana m afụ ụfụ ma na-afụ ụfụ n'ime ụbọchị m. Na ntanetị, ana m egosi onwe m na ebumnuche m yana otu m si ele anya na ndị ọzọ ga-ahụ m. Nke a apụtaghị na m na-agha ụgha onwe m… Achọghị m. Agaghị m. Ana m akpachara anya na-edebe onye na-ede akwụkwọ n'ịntanetị na akọ na anaghị etinye aka na mbibi ya site na idobe bọmbụ ma ọ bụ na-anwa ihu ọha na-eweda ndị ọzọ ma ọ bụ ndị na-ede blọgụ na Intanet. Enwere m ike ịgwa ha na ha mehiere… mana m ka na-asọpụrụ ha. 🙂
Akwụsịla ịrụsi ọrụ ike iji ruo ebe ahụ. Ekwetaghị m na nhazi ọrụ / ndụ. Echere m na ọ bụ nzuzu n'ihi na m hụrụ ihe m na-eme n'anya ma chọọ ka ọ bụrụ akụkụ nke ụbọchị ọ bụla. Enwere m ọtụtụ ntụrụndụ na oge ezinụlọ, kwa. Agbanyeghị, agaghị m etinye aha m na azụmaahịa m na-arụ ọrụ iji gaa goof na ụfọdụ ndị buddies. Ndo, ndi enyi!
Kwụpụ n'ohere ọ bụla. Mgbe ohere rutere m ịde blọgụ, blọọgụ ndị ọbịa, ikwu okwu, dee, kwuo okwu, gwaa, nwee kọfị… M na-eme. Echere m na nke a bụ onyeiche dị iche iche nke ọtụtụ ndị nwere ihe ịga nke ọma na ndị na-agbaso ya mgba. Ọ bụrụ na mmadụ agwa m ka m kwuo okwu n’isiokwu na-enweghị isi, m ga-awụlị ya. Aga m abanye n'ime ya, Google mee ya, chọta ụfọdụ ndị ọkachamara, wee wepụta nnukwu ngosi. Anọ m n'ọtụtụ bọọdụ ma nyere ọtụtụ ụlọ ọrụ na ndị mmadụ aka ka m nwere ike akụkụ ọ bụla nke ụbọchị ọ bụla.
Kpebisie ike mgbe ị na-ekwu okwu gị. N'izu ole na ole gara aga, agwara m onye ndụmọdụ n'ọmụmụ ihe, "Agaghị m agwa gị nke a n'ihi na ekwenyeghị m gị, ana m agwa gị nke a n'ihi na ị mejọrọ.” Ọ na - ada ụda - Amaara m… mana ọ kwaturu ifufe na nwoke ahụ ka ọ wee nwee ike ịhapụ echiche ya na - enweghị isi ma mee ka ọ malite igwu ala n'eziokwu ahụ. Ọ bụghị na m na-ekwu eziokwu mgbe niile - anaghị m. Ọ bụ na mgbe m nwere obi ike, anaghị m ekwe ka ndị naysayers bibie ike ahụ site n'ịkwanye nhụjuanya na obi abụọ ha. Enwere ọtụtụ n'ime ndị ahụ nọ n'ụwa. Adị m aka nká ige ha ntị, n’ihi ya, m na-emechi ha ohere ọ bụla m nwere. N'ụzọ dị otú ahụ, anyị nwere ike ịrụ ọrụ ụfọdụ.
Kwụsị ige ndị na-egbochi gị ntị. Mama m suru ude mgbe m na-agwa ya banyere azụmahịa m. Ajụjụ nke uru, ahụike na ezumike nká ngwa ngwa soro m mara ọkwa… na ihe mere na m na-agwa m na mama m tupu Amalitere m azụmahịa nke m. Enye ama mi ke ofụri esịt, edi enye inịmke mi ke akpanikọ. Ouch, ọ bụ? Ọ dị mma… M dịkwa mma na nke ahụ… na m hụrụ ya n'anya na obi m niile, kwa. Ọ na-ezighi ezi. Nwere ike ịnwe ndị gbara gị gburugburu na-eme otu ihe ahụ. Kwụsị ige ha ntị. Ọ na-emebi ihe ịga nke ọma gị.
Mmelite: Kristian Andersen rụrụ ọmarịcha ọrụ na na-agwa ụdị onwe gị okwu na ihe ngosi a (ekele Pat Coyle maka igosi ya):
Nke a bụ ihe atụ nke otu m si agakwuru ihe… M gụrụ na nke Andy Onye njem ala ahia blog na Pilgrim Ahịa ahọpụtara ka ọ nọrọ na ndepụta ndị ọkachamara nke Blọọgụ akwadoro maka Ndị Ọrụ Na-ahụ Maka Ndị Na-ahụ Maka Ahịa (MENG). Ọ kwesịrị-kwesịrị… Marketing njem uka bụ a blog m na-agụ ụbọchị ọ bụla.
Nke ahụ kwuru… Achọrọ m na ndepụta ahụ. Ọ bụghị okwu asọmpi… ọ bụ ihe mgbaru ọsọ. Achọrọ m Martech Zone a ga-ahụta dịka otu n'ime blọọgụ ahịa kacha mma na Internetntanetị. Anyị na-aga n'ihu n'usoro nke ọma na ndepụta niile yana ndị na - agụ akwụkwọ anyị na - aga n'ihu na - eto… mana achọrọ m na ndepụta!
Kedu ka m ga - esi mee ya?
Anọla m -esonụ ụfọdụ of ndị Blọọgụ na m ga-emetụ onye ọ bụla n'ime ndị ọzọ na-ede blọgụ na-esote aka na afọ na - esote - site na nkwupụta, ikekwe site na ihe omume, tweeting ha nnukwu ọdịnaya, na ijikọghachi ha mgbe ha nwere nnukwu posts. M na-aga ike onwe m n'ime netwọk ha.
Ike na-ada ụda, ma ọ bụghị. Ọ bụrụ na ị gaa n'ihu na-akwagharị na ihe ogologo oge, ọ ga-agagharị. Agaghị m aghọ aghụghọ, gha ụgha, zuo ohi, mbanye anataghị ikike ma ọ bụ gbanwee ụzọ m na netwọk ahụ. Naanị m ga-amalite inye ha uru ruo mgbe a ga-amata m dị ka akụ. Ozugbo nke ahụ mere, ọnụ ụzọ ga-emeghe.
Nke a bụ ihe gosipụtara nke ọma na m na-amalite irite uru na ya. M na-etinyekwa ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe niile ka m wee na-agbanye ego n'ihu… Enwere m olileanya na otu ụbọchị nwere nnukwu ite 'mara mma, n'agbanyeghị. Anaghị m echegbu onwe m gbasara ego (naanị na enweghị ya). Dị nnọọ ka m nwere obi ike na onwe m, m nwekwara obi ike n'ikpeazụ na-erite uru site na ịrụsi ọrụ ike m.
Kedu ihe ị na-eche? Gosiputa onwe gi dika ichoro ka ndi mmadu lee gi anya, gbasie ike, ma bulie ohere obula. Kpoo uzo nke gi ma chere ka onye o bula gwa gi mgbe i nwere ike ma obu ihe g’emezu.
Tags: ika gịakpọ onwe gịka + akeynoteChristian andersennjirimara nke onwepowerpointngosislideshare
Nice Doug, M hụrụ n'anya na "Force" via uru. Cheers!